Glass fitaratra mitokana momba ny fiainana manokana, mpiaro ny lamba miafina - OTAO
Lakaoly feno 3D
Lakaoly UV 3D
3D sisin'ny resin
Jiro manohitra manga
Logo manohitra ny sandoka
hamantatra bebe kokoamahazo vidiny
Fandefasana PROUDUCTS vaovao
Fanohanana tanjaka OTAO Stronger R&D hanombohana tsy tapaka ny vokatra vaovao hanampiana ny mpanjifanay hahatratra ny tsena bebe kokoa.
iPhone 12 andian-dahatsoratra Corning Gorilla voadio ...
Vokatra fitaratra namboarina namboarina tamin'ny logo manokana
2.5D Mazava tsara momba ny vera miady amin'ny vovoka mihantona amin'ny vovoka ...
2.5D 0.33mm Clear Glass Tempered ho an'ny iPhone 12 ...
OTAO dia manome bebe kokoa fanangonana sy fanaingoana mpiaro ny efijery,
SY vahaolana fiarovana hahatratra ny takian'ny mpanjifa na ny tsena
GLASS TEMPERED UV UV 3D
GLASS PREMIUM CORNING
Vera 2.5D TEMPERED
Shenzhen OTAO Technology Co., Ltd. manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana sy fizarana ny mpiaro ny efijery, dia mpamatsy vahaolana iray hiarovana ny efijery sy fiarovana ny lamba. OTAO dia manome fitaovana isan-karazany premium sy multi-function an'ny screen protector, ary ampanjifaina ho an'ny fitaovana isan-karazany, toy ny telefaona finday, Pad, tablette, laptop, smart watch, go pro, fakan-tsary, Fiara, kojakojan-trano, ary milina sns.
Amin'ny maha-mpanamboatra an-tsary ny fiarovana ny efijery manerantany ao amin'ny indostria, ny OTAO® dia mamorona vokatra vaovao tsy tapaka, manatsara ny kalitaon'ny vokatra, manatsara ny serivisinay ho an'ny mpanjifanay, mizara mpiara-miasa sy mpivarotra marika.
"Ny fanampiana ny mpanjifanay hivoatra tsara sy hatanjaka" no hevi-dehibe ao amin'ny serivisy
- Andriamatoa Andy Huang, filohan'ny OTAO,
Ekipa R&D manokana / laboratoara sy fitaovana ao an-trano hanomezana vahaolana vaovao sy mandroso hatrany.
Mamoaka haingana ny maodely vaovao & ny fandefasana haingana miaraka amin'ny fironana amin'ny tsena sy ny fitaovana vaovao.
Fanaraha-maso feno 100%, ary rafitra TQM feno hiantohana ny kalitaon'ny fomba fiasa tsirairay
Namboarina habe na fitaovana samihafa namboarina ho an'ny mpanjifa takiana amin'ny fitaovana sy teti-bola.
Clicnts marika OEM
fijoroana ho vavolombelona an'ny mpanjifa
Ny tena teny avy amin'ny mpanjifa VIP anay
Niara-niasa nandritra ny 7 taona niaraka tamin'ny ekipan'ny OTAO, misaotra tamin'ny asa mafy sy ny fanohanan'izy ireo, ary manome anay entana vaovao sy vokatra tsara kalitao hatrany. Manaraka tsara ny baikonay izy ireo mandra-pivarotanay azy ireo amin'ny mpanjifanay. Ny mpiaro ny efijery OTAO dia amidy tsara eto amin'ny fireneko, ary mitondra orinasa maro kokoa ho anay .....
Nahazo hevitra tsara avy amin'ny mpanjifanay izahay. Mahafinaritra izany. Faly be aho fa azoko mivantana avy eo aminao ilay vera namboarina. Hanitatra azy ireo haingana amin'ny fivarotany rehetra izy ireo ary hametraka amin'ny fivarotana an-tserasera. Ankafizinay ny varotra OTAO manome anay torohevitra sy tolo-kevitra marina alohan'ny hametrahantsika filaminana isaky ny ...
Nanatri-maso ny fivoarana sy ny fitomboan'ny OTAO izahay, miaraka amina vokatra marobe sy kalitao tsara. Amin'ny maha tompona marika antsika dia mila manolotra ny vokatra amina kalitao tsara sy vidiny tsara izahay. OTAO dia nanohana anay hatrany. Matoky izahay amin'izany ary mitady fiaraha-miasa bebe kokoa ...
Navoaka tamin'ny volana aprily ny mpiaro ny efijery voaroaka namboarina tamin'ny iPhone 13 an'ny Apple
Mahasoa anao ilay mpiaro ny efijery !!!
Fandaminana ny filaharan'ny mpiaro ny sarin'ny Taombaovao sinoa
Antoko Fanao isan-taona OTAO 2020 natao tamin'ny 20 Jan
Manome serivisy 24 ora izahay, azafady mifandraisa anay mivantana!MANONTANY ANAO
Silicon toy ny 3D
3 / F, Bldg B, Zhashi Industrial Park, # 16 Lixin Road, Danzhutou Nanwan, Longgang District, Shenzhen City, Sina